आजबाट नेपालमा सुरु भएको डब्लूएचओको बैठक कस्तो हो? के-के छन् एजेन्डा? [भिडियो] विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रका क्षेत्रीय कार्यकारी समितिको ७४औं बैठक आजबाट काठमाडौंमा सुरु भएको छ। सोमबार, भदौ २१, २०७८
हाइड्रा फेसियल के हो, कसरी गरिन्छ? विधिको माध्यमबाट अनुहारको छालामा रहेको फोहोर तथा मृत छालालाई निकाली चमक ल्याउन हाइड्रा फेसियल गर्न सकिन्छ। छालाको प्रकार र समस्या अनुहार हाइड्रा फेसियल गर्न मिल्नु नै यसको विशेषता हो। शुक्रबार, भदौ १८, २०७८
गर्भावस्थामा किन हुन्छ मधुमेह? कसरी बच्न सकिन्छ? गर्भावस्थामा कतिपय महिलालाई मधुमेहको समस्या देखिन सक्छ। जसलाई चिकित्सकीय भाषामा ‘जेस्टेशनल डायबिटिज’ भनिन्छ। शनिबार, भदौ १२, २०७८
कोरोनाले निम्त्याएको तत्कालीन र दीर्घकालीन मानसिक समस्याहरु के के हुन्? कसरी समाधान गर्ने? कोरोना महामारी र लकडाउनको समयमा अधिकांशलाई एन्जाइटी, डिप्रेसन जस्ता मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरु देखिएका छन्। शनिबार, भदौ ५, २०७८
मौसमी फ्लू र कोरोनाबीचको फरक कसरी पहिचान गर्ने? (भिडियो) कोरोना भाइरस र मौसमी फ्लूको लक्षणहरु लगभग उस्तै हुन्छ। त्यसैले कोरोना र मौसमी फ्लू बीचको भिन्नता छुट्याउनु त्यति सहज छैन। शनिबार, साउन ३०, २०७८
खाली पेटमा किन खानु हुँदैन दूधको चिया? कालो चिया ठिक की दूधको? आइतबार, वैशाख ५, २०७८
दाँत किन पहेँलो हुन्छ? के–के कुरामा ध्यान दिने? [भिडियो] शनिबार, चैत २१, २०७७
महिनावारी हुँदा पेट किन दुख्छ? कसरी बच्ने? शनिबार, चैत १४, २०७७
गर्मीमा कस्ता संक्रामक रोगहरु देखिन सक्छन्? कसरी बच्ने? [भिडियो] शनिबार, चैत ७, २०७७
के हो अल्छी आँखा? कसरी बच्ने? शनिबार, फागुन २९, २०७७
आविष्कार केन्द्रका इन्जिनियर र डा विज्ञानले बनाएको 'स्पिकिङ भल्भ' के हो? (भिडियो वार्ता) शुक्रबार, फागुन २८, २०७७
के कारणले बिग्रिन्छ मिर्गौला? जोगाउने कसरी? डा मिधन श्रेष्ठसँग भिडियो वार्ता ‘सरकारले डायलाइसिस सेवा दिएर राम्रो गरेको छ, नत्र बिरामीहरुले डायलाइसिस सेवा लिनै सक्दैनथें,’ डा श्रेष्ठले भने, ‘तर, मिर्गौलाका बिरामीको जीवनभरका लागि लाग्ने औषधि खर्चमा सहुलियत छैन। सरकारले दिने सहुलियत बिरामीका लागि पर्याप्त नै त छैन।’ बिहीबार, फागुन २७, २०७७
जिम गर्दा गरिने गल्तीहरु के–के हुन्? के–के कुरामा ध्यान दिने? शनिबार, फागुन २२, २०७७
के हो इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ? कसरी गर्ने? इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ भनेको के हो? यसले शरीरलाई गर्ने फाइदाहरु के के हुन्? लगायत विषयमा हामीले नर्भिक अस्पतालका पोषणविज्ञ प्रणिती सिंहसँग कुराकानी गरेका छौँ। शनिबार, फागुन १५, २०७७
वर्क फ्रम होम र अनलाइन क्लासले आँखाको समस्या बढाउँदै, कसरी बच्ने? लगातार कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल लगायत उपकरण चलाउँदा आँखामा असर पुग्ने दृष्टि विशेषज्ञ डा दिपक कुमार साह बताउँछन्। यी उपकरणको लगातार प्रयोगले आँखामा तत्कालीन तथा दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउने उनले बताए। शनिबार, फागुन ८, २०७७
विश्व क्यान्सर दिवसको सन्दर्भमा पूर्वमिस नेपाल क्लबले गरेको अन्तर्क्रिया [भिडियो] विश्व क्यान्सर दिवसको अवसरमा पूर्वमिस नेपाल क्लबले नेपालमा क्यान्सर रोगको अवस्था, निदान, उपचार र रोकथामबारे अभिनेत्री मनिषा कोइराला,पूर्वमिस नेपाल र क्यान्सर रोग विशेषज्ञसँग गरेको अन्तरक्रिया बिहीबार, माघ २२, २०७७
चिसोमा छालालाई सुख्खा हुनबाट कसरी जोगाउने? न्यानोपनका लागि चिसोमा धेरैले आगो ताप्ने, हिटर बाल्ने र एयर कन्डिसन (एसी) को प्रयोग गर्छन्। यी सबैले पनि छालालाई सुख्खा बनाउने छाला रोग विशेषज्ञ प्राडा सबिना भट्टराई बताउँछिन्। बिहीबार, माघ १५, २०७७
भिडियो रिपोर्ट - टेकु अस्पतालमा कोभिड खोपको पहिलो दिन सबै चिकित्सकहरु अस्पतालको परिसरमा जम्मा भएका थिए। अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीको अनुहारमा बेग्लै मुस्कान देखिन्थ्यो। त्यो मुस्कानमा धेरै खुसी र केही डरको समिश्रण थियो। बुधबार, माघ १४, २०७७
के सुतेको बेला धेरै घुर्नु रोग हो? किन हुन्छ? कसरी छुट्कारा पाउने? सामान्यतया घुर्ने समस्या श्वास फेर्ने नली सानो भएर हुन्छ। श्वास फेर्ने नली विभिन्न कारणले सानो हुन्छन्। चिकित्सकका अनुसार सय जना व्यक्तिमध्ये १५ देखि २० जनालाई यो समस्या देखिन्छ। शनिबार, माघ ३, २०७७
मुटुका बिरामीलाई जाडो मौसम किन जोखिमपूर्ण? चिसो मौसममा मानिसमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुँदा मुटुमा संक्रमण हुनसक्छ। चसोबाट मुटुलाई जोगाउन सम्भव भएसम्म चिसोबाट नै बच्नुपर्छ। शनिबार, पुस २५, २०७७
चिसोमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता किन कम हुन्छ? खानपानमा के–कसरी ध्यान दिने? चिसोमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता किन कम हुन्छ, विशेषगरी कुन उमेर समूहले र कसरी ध्यान दिनुपर्छ लगायत विषयमा हामीले पोषणविद् बिनिता पन्तसँग कुराकानी गरेका छौं। पन्तसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः शनिबार, पुस १८, २०७७
युकेबाट नेपाल आएका व्यक्तिमा देखिएको कोरोना संक्रमण नयाँ रुपको भाइरस हो? शुक्रबार, पुस १७, २०७७
स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले पदभारपछि के भने? आइतबार, पुस १२, २०७७
धेरै बेसार सेवन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक, के-के छन् बेफाइदा? शनिबार, पुस ११, २०७७
ह्याण्ड स्यानिटाइजरको अत्यधिक प्रयोगले छालामा कस्तो असर गर्छ? स्यानिटाइजरको अत्यधिक प्रयोगले छालामा के कस्तो असर गर्न पुग्न सक्छ ? यसबाट निम्तिने समस्याबाट बच्न के गर्ने लगायतका विषयमा हामीले छाला रोग विशेषज्ञ डा भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छौँ। शनिबार, पुस ४, २०७७